१० सर्वश्रेष्ठ तस्बिर दर्शकहरू विन्डोज अनुप्रयोग replace Emulator.online ▷ replace प्रतिस्थापन गर्न
विन्डोज १० को नेटिभ फोटो भ्यूअर प्रणाली प्रयोगकर्ताहरूमा धेरै लोकप्रिय छैन। मुख्यतया, छविहरू खोल्नको ढिलोपनका कारण र केही ढाँचाहरूसँग उपयुक्त छ। साथै, उपलब्ध सम्पादन कार्यहरू प्रतिबन्धित छन्।
यदि तपाईं प्रोग्रामको विकल्प खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हामीले तपाईंको विन्डोज पीसीमा डाउनलोड गर्नका लागि १० सर्वश्रेष्ठ फ्रि छवि दर्शकहरूको सूचीकरण गरेका छौं। चेक आउट गर्नुहोस्!
१. फास्टस्टोन छवि दर्शक
हल्का वजन र प्रयोग गर्न सजिलो, फास्टस्टोन छवि दर्शकले तपाईंलाई पूर्ण स्क्रिनमा छविहरू हेर्न, जुम गर्न, र EXIF ​​डाटा हेर्न अनुमति दिन्छ। फोल्डर नेभिगेसन शीर्ष मेनूबाट गर्न सकिन्छ। उपकरणहरू पर्दाको तलको पट्टीमा उपलब्ध छन्।
दर्जनौं विस्तारसँग मिल्दो, यसले सम्पादन कार्य पनि गर्दछ। यसमा काँटछाँट, पुनःआकार गर्ने, रातो-आँखा हटाउने, र प्रकाश समायोजन समावेश छ। स्लाइड शो, सम्मिलित पाठहरू र फोटोहरूमा स्टिकरहरू, अन्य विकल्पहरूको बीचमा पनि बनाउन सम्भव छ।
फास्टस्टोन छवि दर्शक (नि: शुल्क): विन्डोज १०,,,,, भिस्टा र एक्सपी।
२. विनोरो ट्वीकर
विनोरोसँग विन्डोज सेटिंग्स र सुविधाहरू लाई अनुकूलित गर्न शाब्दिक दर्जनौं कार्यहरू छन्। ती मध्ये, क्लासिक प्रणाली फोटो दर्शकलाई विन्डोज १० मा ल्याउने विकल्प छ।
यो गर्नका लागि प्रोग्राम खोल्नुहोस् र खोजी गर्नुहोस् फोटो खोजी बाकसमा। थिच्नुस क्लासिक अनुप्रयोगहरू / सक्रिय विन्डोज फोटो प्राप्त गर्नुहोस् Verr त्यसपछि जानुहोस् विन्डोज फोटो सक्रिय गर्नुहोस् Verr.
तपाईंलाई अनुप्रयोगको पूर्वनिर्धारित सेटिंग्समा लगिनेछ। फोटो दर्शकमा परिभाषित अनुप्रयोग क्लिक गर्नुहोस्, र सूचीमा देखा पर्दछ, जानुहोस् विन्डोज फोटो दर्शक। हो, यो विकल्पहरूमा हुनेछ, पुराना दिनहरू जस्तै।
विनोरो ट्वीकर (नि: शुल्क): विन्डोज १०, and र।
Image. इमेज ग्लास
हाम्रो सूचीमा सब भन्दा राम्रो इन्टरफेस प्रोग्रामहरू मध्ये एक। इमेज ग्लासले राम्रो छवि दर्शकको खोजी गरिरहेकाहरूको लागि स्रोतहरू प्रदान गर्दछ, कुनै अतिरिक्त बिना। अनुप्रयोगले तपाइँलाई छवि तेर्सो र ठाडो घुमाउन, साथै चौडाई, उचाई समायोजन गर्न वा पूरै स्क्रिन ओगट्न अनुमति दिन्छ।
तपाई एक्स्टेन्सनहरूलाई विशिष्ट छवि सम्पादकमा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरण को लागी, फोटोशपमा PNG खोल्नुहोस्। तपाईं उपकरणपट्टी, थम्बनेल प्यानल, र गाढा वा चेकर पृष्ठभूमि प्रदर्शन गर्न पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
कार्यक्रमले P० भन्दा बढी ढाँचामा फाईलहरू समर्थन गर्दछ, जस्तै JPG, GIF, SVG, HEIC, र RAW।
इमेज ग्लास (नि: शुल्क): विन्डोज १०, .10.१,,, एसपी १,।
हल्का, छिटो र कार्यात्मक जेपीईजीभ्यू परिभाषित गर्न सक्ने शब्दहरू हुन्। अनुप्रयोगले छवि हाइलाइट गर्दछ, कम से कम र पारदर्शी आइकनहरूको साथ उपकरणपट्टीको साथ। यो केवल तब प्रदर्शन हुन्छ जब माउस स्क्रिनको तल मुनि हो। एक हिस्टोग्राम सहित फोटो को बारे मा डाटा, अक्षर i क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ।
यदि तपाईंले सूचकलाई तल सार्नुभयो भने, केहि रोचक सम्पादन विकल्पहरू प्रदर्शित हुनेछन्। ती मध्ये, कन्ट्रास्ट, चमक र संतृप्ति, छायांकन परिवर्तन र धमिलो समायोजनको लागि उपकरण। यसले JPEG, BMP, PNG, WEBP, TGA, GIF र TIF ढाँचाहरूलाई समर्थन गर्दछ।
JPEGView (नि: शुल्क): विन्डोज १०,,,,, भिस्टा र एक्सपी
5. १२123 फोटो दर्शक
१२123 फोटो दर्शक विन्डोजको लागि अन्य छवि दर्शकहरू, जस्तै LIVP, BPG र PSD मा फेला पार्न गाह्रो ढाँचाहरूको ढाँचाको लागि यसको समर्थनको लागि बाहिर उभिन्छ। अनुप्रयोगले तपाइँलाई एकल क्लिकको साथ जुम गर्न अनुमति दिन्छ र सजिलो प्रयोगको लागि कुञ्जीपाटी सर्टकटहरू छन्।
थप रूपमा, यससँग विभिन्न सम्पादन कार्यहरू छन्, जस्तै फिल्टरहरू, छवि मर्ज, र पाठ सम्मिलन। कार्यक्रमले एनिमेसन विस्तारहरू, जस्तै GIF, APNG, र WebP लाई समर्थन गर्दछ। केवल नकारात्मक पक्षले होम स्क्रिनमा सशुल्क संस्करणको लागि विज्ञापनसँगै काम गर्नुपर्दछ।
१२123 फोटो दर्शक (नि: शुल्क): विन्डोज १० र .10.१
इरफानभ्यु एक हल्का वजनको छ, प्रयोग गर्न सजिलो दर्शकको साथ प्रिन्ट गर्न, छविको अंश क्रप गर्ने, र EXIF ​​जानकारी हेर्नका लागि उपयोग गर्न सजिलो बटनहरूको साथ। कार्यक्रमसँग ढाँचा रूपान्तरण प्रकार्य छ, जस्तै PNG बाट JPEG मा सजिलैसँग।
तपाईं वाटरमार्क घुसाउन, बोर्डरहरू थप्न, र र color्ग सुधार पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अझै सम्पादनको सम्बन्धमा, प्रयोगकर्ताले फाईललाई पुनःआकार गर्न र घुमाउन, फिल्टरहरू र प्रभावहरू लागू गर्न, र अर्कोको लागि एउटा र change परिवर्तन गर्न सक्दछ।
अनुप्रयोग सम्पादनको अनुभव नभएका व्यक्तिहरूका लागि त्यति सहज नहुन सक्छ। साथै, यसलाई पुर्तगालीमा प्रयोग गर्न, तपाईंले विकासकर्ताको वेबसाइटमा उपलब्ध भाषा प्याक डाउनलोड र स्थापना गर्नु पर्छ। तर प्रक्रिया छिटो छ।
इरफानभ्यू (नि: शुल्क): विन्डोज १०,,,,, भिस्टा र एक्सपी
इरफानभ्यू भाषा प्याक
एक्सएनभ्यू अर्को फोटो अवलोकन विकल्प हो जुन धेरै थप सुविधाहरूको साथ आउँदछ। यद्यपि यो प्रयोज्यताको सर्तमा मित्रैली विकल्प मध्ये एक होइन, यो 500०० भन्दा बढी ढाँचाहरूसँग उपयुक्त छ र ब्याच कार्यहरूलाई अनुमति दिन्छ। तिनीहरूको बिचमा पुन: नामकरण गर्नुहोस् र एकै पटकमा धेरै फाइलहरू रूपान्तरण गर्नुहोस्।
तपाईं छविहरू पुनःआकार गर्न र क्रप गर्न, छविहरू तर्न, र सही रातो-आँखा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चमकहरू, कन्ट्रास्ट, संतृप्ति, शेडहरू जस्ता पक्षहरू समायोजन गर्ने सम्भावना पनि छ।
XnView (नि: शुल्क): विन्डोज १० र .10.१
हल्का वजन र प्रयोग गर्न सजिलो, हनीभ्यूले छवि दर्शकको अपेक्षित आधारभूत सुविधाहरू हाइलाइट गर्दछ। त्यो हो, जुम इन र आउट, फोटो घुमाउनुहोस् र अर्को अर्कोमा जानुहोस् वा पछिल्लोमा फर्कनुहोस्।
EXIF जानकारी चाँडै स्क्रिनको माथिल्लो बायाँ बटनमा पहुँच गर्न सकिन्छ। ब्याच छवि ढाँचा रूपान्तरणको अलावा, कार्यक्रमले तपाईंलाई संकुचित फाइलहरू उनीहरूलाई डिकम्प्रेस नगरी हेर्न अनुमति दिन्छ।
हनीभ्यू (नि: शुल्क): विन्डोज १०, .10.१,,,,, भिस्टा र एक्सपी।
Nomacs एक क्लासिक विन्डोज फोटो दर्शक को याद ताजा गरीरहेको छ। त्यसकारण, जो कोही माइक्रोसफ्ट प्रोग्राम मन पराउँछन् यो अनुप्रयोग को उपयोग गर्न कुनै कठिनाई हुनु हुँदैन। प्रदर्शन आफैंको लागि, यसले तपाईंलाई सजिलैसँग पूर्ण स्क्रीन, १००% वा प्रारम्भिक बीच मोड स्विच गर्न अनुमति दिन्छ।
हाईलाइट बटनहरू प्रयोग गरेर छविलाई घुमाउन, पुनःआकार गर्न र क्रप गर्न पनि सम्भव छ। सफ्टवेयरले विभिन्न सम्पादन उपकरणहरू प्रदान गर्दछ जस्तै संतृप्ति समायोजन, पीसी आइकन सिर्जना, र अधिक।
nomacs (नि: शुल्क): विन्डोज १०,,,,, भिस्टा, एक्सपी र २०००
Google. गुगल फोटोहरू
हाम्रो सूचीमा एक मात्र अनलाइन दर्शक, गुगल फोटोहरू ती विकल्पहरू हुन सक्छन् जो एकै ठाउँमा सबै फाईलहरू सँगै राख्न मन पराउँछन्। मोबाइल अनुप्रयोगले तपाईंलाई फोटोहरू स्वचालित ब्याकअप गर्न र तिनीहरूलाई ब्राउजरबाट पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ।
यदि तपाइँ चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ पिसि र Google ड्राइवमा भण्डारण गरिएका छविहरू पनि प्रोग्रामको वेब संस्करणमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सेवासँग शीर्षकहरू र ठाउँहरू र साधारण सम्पादन उपकरणहरूको लागि खोजी छ। यो पनि अघिल्लो वर्षहरु मा उही दिन बाट स्वचालित सम्मेलन र स्मृति चिन्ह छ।
केहि को लागी एक वापसी हुन सक्छ यो प्रयोग गर्न को लागी एक इन्टरनेट जडान को आवश्यकता छ।
गुगल फोटोहरू (नि: शुल्क): वेब
नयाँ फोटो दर्शकलाई पूर्वनिर्धारितको रूपमा सेट गर्नुहोस्
विन्डोजले नेटिभ प्रणाली प्रोग्रामलाई पूर्वनिर्धारित दर्शकको रूपमा परिभाषित गर्दछ। त्यो हो, यो सबै फोटोहरू स्वचालित रूपमा खोल्न प्रयोग हुनेछ। डाउनलोड गरिएको प्रोग्राममा स्विच गर्न, तलका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस्:
1. छविमा दायाँ क्लिक गर्नुहोस्, र मेनूमा जुन खुल्छ, क्लिक गर्नुहोस् खोल्नुहोस्;
2. जति तपाईं प्रदर्शन सूचीमा शो हेर्दै हुनुहुन्छ, छनौट गर्नुहोस् अर्को अनुप्रयोग छनौट गर्नुहोस्;
3. प्रोग्राम प्रतिमा क्लिक गर्नु अघि, बक्सलाई पछाडि जाँच गर्नुहोस् सँधै यो प्रयोग गर्नुहोस् फाईलहरू खोल्नको लागि अनुप्रयोग .jpg (वा जे पनि छवि विस्तार हो);
4. अब, प्रोग्राममा क्लिक गर्नुहोस् र यकिन गर्नुहोस् ठीक.
यदि तपाइँ प्रोग्रामको नाम फेला पार्न सक्नुहुन्न भने, सूची तल स्क्रोल गर्नुहोस् र जानुहोस् थप अनुप्रयोगहरू। यदि तपाइँ अझै पनी फेला पार्न सक्नुहुन्न भने क्लिक गर्नुहोस् यस पीसीमा अर्को अनुप्रयोगको लागि खोजी गर्नुहोस्। खोल्ने बक्समा, खोजी बारमा प्रोग्रामको नाम टाइप गर्नुहोस्।
जब तपाइँ यसलाई फेला पार्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि बटनमा खोल्नुहोस्। त्यसोभए माथिको चरणहरू दोहोर्याउनुहोस्, अनुप्रयोग अनुप्रयोग विकल्पहरू बीचमा सामेल हुनेछ।
पीसी र म्याकका लागि उत्कृष्ट भिडियो प्लेयरहरू